a - TECHNOMANIAC's - BLOG: February 2006
ကျွန်တော် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် အတော်လေး ခန်းခြောက်သွားတယ်လို့ထင်မိပါတယ်။ ကျောင်းစာတွေ၊ စာမေးပွဲတွေ၊ အလုပ်ကိစ္စတွေ၊ နှလုံးသားထိုးနှက်မှုတွေခံလိုက်ရပြီးသကာလမှာ လူလည်းအတော်ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ အဓိက ကတော့အဲဒီ ကောင်မလေးကြောင့်လို့ ပြောရင် မလွန်လောက်ပါဘူး။ ကျွန်တော် စကားတွေဆိတ်သုဉ်းသွားပါပြီ။ သူမကိုဖြစ်နိုင်ရင် ဘာမျှမထိခိုက်စေဘဲ ဥပေက္ခာထားလိုက်ချင်ပါပြီဗျာ။ ....
အိုး ၂ ရက်ပဲလိုတော့တာပဲ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အဓိက တောင်ကုန်းဘာသာရပ်ကြီး အိုပီအက်စ်ဝိုင်(OPSY) ၊ ကွန်ပြူတာ OS တွေရဲ့ အခြေခံ ... Managers တွေ Modules Structures တွေ .. . နည်းတာမှမဟုတ်ပဲ။ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် သီချင်းလို သေပြီဆရာလို့ အော်လိုက်ချင်တယ် ။။ ပြောသာပြောရတာ ဒီတနေ့ထဲမှာပဲ ပို့စ် ၂ ခု တင်မိ လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တောင် အတော် အားယားနေပါလားဆိုပြီးရှက်မိပါတယ် ဗျာ။ ... OPSY ပြီးရင် တော့ NETF လို့ခေါ်တဲ့ ကွန်ယက်ဘာသာ ၁ခုပါ။ ဖတ်တော့ဖတ်နေတာပဲ။ အိုပီအက်စ်ဝိုင်ကိုတော့ အေ လောက်ရဖို့ ကျွန်တော်ရုန်းကန် ရအုံးမယ်။ နက်အက်ဖ် ကတော့ သြော် ဂုဏ်ထူးရယ် ငါ့ဖက်လှည့် ပါဦး ဆိုပြီးခေါ်ကြည့်ပါအုံးမယ်။ စာကတော့ကြည့်တုံး။ ရ မရ တော့ ဘုရား စူးပါပဲ။ အဟိ။
ကျွန်တော်ကျောင်းပိတ်ရက် ကိုမျှော်နေပါတယ်။ လုပ်စရာတွေ အများကြီးပါ။ ဖလက်ရှ် တွေက ခုမှ လေ့လာလို့ကောင်းတုံး၊ AJAX ကလည်း တစ်သက်လုံး မထိထားတာ ခုမှ သူများလုပ်မှလုပ်ချင်လာတယ်။ PHP ကလည်း မတတ်တခေါက် ASP ကနောက် Sem သင်ရမယ်ဆိုပြီး ခုထိဘာမှ မသိသေး ကြားတာတော့ VB.NEt လိုပါပဲတဲ့။ .. သြော် .... ဘ၀ ဘ၀. ကုန်းကုန်းပြီးအော်လိုက်ချင်တယ်။ ကျွန်တော် အတော်လေးနောက်ကျနေသေးတာပဲ။ ဒီရောက်မှ Broadband Internet တွေသုံးဖူးသကိုး။ google ကိုချစ်ရကောင်းမှန်းလည်း ခုမှသိတာ စိတ်ညစ်ပါပေ့ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ လူငယ်တွေ အသိခေါက်ခက် အ၀င်နက်နေ အောင် ဘာတွေက ပိတ်ခဲ့တာတုံး ဆိုတာကို ထိုင်စဉ်းစားနေမိသေးတယ် .. အင်း .. ကိုယ့်သူငယ်ချင်း တွေကိုယ့်ထက်သာ သွားတာကို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ကြီး မျှော်လင့်နေပါတယ်ဗျာ။ မြန်မာပြည်က သူငယ်ချင်းတို့ ကြိုးစားပြုံးပျော်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းနှင့် ......... .
Posted by Wai Phyo at10:19 PM0comments
Posted by Wai Phyo at10:11 AM0comments
Posted by Wai Phyo at6:12 PM0comments
Phew .... Yay ... I wanna forget everthings but I couldn't. Yesterday wasaday of desperate. That's my mistake to get that place. I shouldn't have gone there and felt likeashit there. I was totally lost and upset. It'sadry place for me at that time. Normally, the place is interesting but yesterday was . I don't wanna blame to others, that's my fault, too. Finally, what i can grasp is the hatred of BEDOK. I will feel sour if i have to go there again. And that's unforgettable Night for me ( at Singapore )........ So STUPID I AM.
I don't wanna put these craps on her.... May be i am too generous to bottle up all these feelings. and I won't vent out or Angry at any one. Hmm.. That's what I am. I feel that things will get crammed and if they reach Bottleneck, I am worried I will be pissed off.
Okay, Enough for Yesterday.
[ Give meadrop of liquid! What liquid ? Poison ? Liquer ? No No No. I want Individual amnesia. Wanna forget her and the portions we stayed together. So give me That Chemicals now! ]
Posted by Wai Phyo at12:54 PM0comments
I don't know what happened to me, today. A lot of things are done in unpleasant stage. PCT written test make me likeachump. A lot of crappy mistakes i did. I couldn't even recall the Purpose of System Configuration Files : C:\_Windows\_System32\_Config . ? :( . Moreover, I am accused that I communicated in ILLEGAL Ways with my friends in exam room? How? I am totally desperate.
And one more thing, I had some problem with my Friend... I got some nagging things with Her. I got upset and I stop speaking with her. :/ Am i totally wierd andakinda of easily-burst person ? I'd say Sorry if you think so... that's End Of File. Your syntax will be totally wrong. Hm, I wanna apologize her to show that I am not that bad :D ... Finally, I wanna sleep now and I hope things will past through in great pleasure if i fall asleep. Hope so .. hope so. .hope so....
[ who says I'm interested in her ? who says i care her ? it's more than that. You Dump.. I love her! ]
Posted by Wai Phyo at12:56 AM0comments
Posted by Wai Phyo at8:02 PM0comments
Posted by Wai Phyo at8:01 PM0comments
My Group Photo ..... @ school today. Can u spot me ?
Posted by Wai Phyo at7:58 PM0comments
Posted by Wai Phyo at7:57 PM0comments